Habar-Gidir oo garyaqaan u qabsatay DOWLADDA Mareykanka si lacag mardhaw uga hesho dagaalkii unisom ee black hawk down - iftineducation.com
Habar-Gidir oo garyaqaan u qabsatay DOWLADDA Mareykanka si lacag mardhaw uga hesho dagaalkii unisom ee black hawk down
iftineducation.com – Shaqsiyaad ka tirsan beesha Habir Gidir ayaa qabsaday Garyaqan Steven Schneebaum, oo website-ka POLITICO u sheegay inay doonayaan in Dowladda Mareykanka loo sheego xaqiiqda jirta si loogu helo lacag.
Habar Gidir ayaa ku doodeysa in dad badan ay uga dhinteen markii ciidamda Mareykanka ay howlgalka ka fulinayeen Muqdisho 1993-kii— Garyaqaankan ayaa ah mid macluumaad fara badan ka qoray buugga iyo filimkii “Black Hawk Down”.
Garyaqaan Schneebaum ayaa sheegay in magdhowga laga helo dowladda Mareykanka ay keeneyso in xiriirka Mareykanka lagu hagaajinayo oo u noqon karta maalgeshi fiican.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Dadkan Habargedir ayaa ah kuwo dhaqan fiican la yimid oo tusay sida ay uga go’antahay in sumcadda Mareykanka la hagaajiyo.” Hadalkiisa ayuu ku sii darey “Dadkan dhibaato fara badan baa gaartay oo wey istaahilaan wax walba oo Mareykanka ugu talo-galo, oo kama hadleyno magdhow dhaawacyadii soo gaaray.”
Mareykanka ayaa Somalia ka howlgalay 1992 -1994, oo uu markii hore howlgalku ahaa mid gar-gaar bani’aadanimo, hase yeeshee markii danbe isku bedelay dagaal ciidan.
Habargedir ayaa waxaa hoggaaminayey Dagaal-ooge Maxamed Faarax Ceydiid, oo la dagaalay ciidanka Mareykanka iyo Qaramada Midoobey. Ciidanka Mareykanka oo doonayey inay joojiyaan Ceydiid ayaa waxey October 1993-kii laayeen Soomaalida Muqdisho degta. 18 Ciidanka Mareykanka ayaa halkaas sidoo kale ku dhintay, iyo boqollaal Soomaali ah.
“Laakin taas waxey aheyd 20 sano ka hor” ayuu yiri Garyaqaan Schneebaum. Soomaaliya ayaa horumar weyn sameysey oo ay ku dhisteen Dowlad Dhexe, walow ay weli jiraan caqabado ciidanka Islaamiyiinta oo dagaalo wada.
“Iskuma dayeyno inaan dib u dhisno sumcadda iyo muuqaalka Ceydiid, laakin waxaan ka hadleyno waa waxii waagaas dhacay, haddana waxaa la joogaa waqti kale.” Ayuu yiri Schneebaum, oo saacad walba ku shaqeeya 640 US dollar.
Waxuuna sheegay inuu marka hore uu ka shaqeynayo sidii uu qabiilka ugu diyaarin lahaa dacwad keeni karta in Wasaaradda Arrimaha Dibedda ama hay’adda USAID iyo waaxyaha kale ee dowladda Mareykanka ay dhaqaale u siin lahaayeen.
“Waxaan taaganahay in qabiilkan ay soo gaartay dhibaato baaxad weyn iyo dhaawac aan la qiyaasi karin, laakin magdhowga aan raadineyno ma aha dhaawaca soo gaaray, ee waxuu ku wajahan xaaladda ay hadda joogaan qabiilku. Tanoo la macno ah in aysan argagaxiso noqon oo ay taageeraan Mareykanka, oo ay yihiin qabiil nabada jecel oo sharcigana u hoggaansama.” Ayuu yiri Garyaqaanku.
Halkan ka aqri warbixinta POLITICO.COM
Ragii weeraray Xalane oo la ogaaday in ay ka tirsanaayeen DF (Xeelad cusub)
Daawo:- Difaacyada Shiicadda Ee Magaalada Xalab Oo Madaafiic Iyo Sawaariikh Roobka Looga Dhigay